जन्मदेखि आर्यघाटसम्मको दूरी | Nagarik News - Nepal Republic Media
१ आश्विन २०७७ ६ मिनेट पाठ
कुनै राज्यका मन्त्रीलाई सपनामा आएर कालराजाले भने– मन्त्री तिम्रो प्रधानमन्त्रीको आयु भोलिको साँझसम्म मात्र छ, साँझको सूर्य डुब्नासाथ मैले तिम्रो प्रधानमन्त्रीलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसो त म कसैलाई पनि खबर नगरी आएर आफ्नो काम पूरा गर्छु, यो मेरो नियम हो तर तिम्रो र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध राम्रो छ अनि मलाई उनको परीक्षा पनि लिने इच्छा भयो र मैले यो जुक्ति लगाइ तिमीमार्फत जानकारी दिने प्रयास गरेँ । भोलि बिहानै उठेर तिमीले यो जानकारी आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई दिनू । उनी अवश्य झस्कने छन् तर उनलाई दुईवटा विकल्प एक बोरा असर्फी र उनको वायुपंखी घोडा उनको अगाडि तयार गरिदिनू र भन्नू– तपाईंको आयु त एक दिनको मात्र छ । यी दुई चिजलाई जीवनको अन्तिम क्षणमा तपाईं जसरी प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ गर्नु रे भनेर सम्झाउनू । मन्त्री निद्राबाट झल्यास्स ब्युँझे, यस्तो साक्षात सपना छ तर विश्वास लागेको छैन । म प्रधानमन्त्रीकहाँ जाउँ कि नजाउँ ? नजाउँ अहिलेसम्म सेवा र साथ दिएँ, उहाँको जीवनको अन्तिम क्षण रहेछ भने त मलाई पश्चाताप हुनेछ । सपनाको खबर लिएर मन्त्री सबेरै प्रधानमन्त्री कहाँ पुगे र सपनाको बेलिबिस्तार लगाए ।
प्रधानमन्त्री आश्चर्यमा परे ! उनले आफ्नो सपनामा पनि यस्तो सोच्न भ्याएका थिएनन् । तर मन्त्रीको सपना साँचो हो भने त मैले केही गर्नैपर्छ । पाँच मिनेट जति आँखा चिम्ले र मन्त्रीले अगाडि ल्याएर राखिदिएको असर्फीको बोरा घोडाको पिठ्युँमा बाँधेर आफू पनि घोडा चढेर दौडिए । यसरी दौडिए, घोडालाई कुदाएर कि कतै नरोकिइकन, पानीसम्म नपिएर कुदे । सूर्य अस्ताउनै लागेको थियो । अर्को राज्यको सिमानामा पुगे । घोडा रोके, घोडाबाट ओर्लिए र एउटा चौतारीमा आराम गर्न बसे । उनले आफूलाई स्यावासी दिए र घोडालाई पनि किनकि उनी मृत्युलाई झुक्क्याएर आफ्नो ठाउँबाट भागेर छिमेकी राज्यको सिमानामा पुग्न सफल भएका थिए । घोडालाई सुम्सुम्याए, माया गरे जीवनमा पहिलोपटक र भने– कति सेवा गरिस् तैंले मेरो ! आज पनि एकछिन कहीँ नरोकी तैंले यहाँसम्म पु-याइस् ।
अरूलाई जान्ने र बुझ्ने कोसिस गर्नेले आफ्नो जीवनको गीता आफैँ पढ्न सके कति आनन्ददायक परिवर्तन आउँदो होला जीवनमा ।
यति भनेर टुसुक्क चौतारीमा के बसेका थिए, काल राजाले पछाडिबाट प्रधानमन्त्रीको काँधमा हात राखे र भने– घोडालाई त मैले पनि धन्यवाद दिनुपर्छ । तिम्रो मृत्यु यही स्थानमा हुनुपर्ने थियो तर १२ घण्टामा तिमी कसरी यहाँ पुग्छौ होला भन्ने मलाई चिन्ता थियो । सूर्यास्तसँगै लैजानु थियो मैले तिमीलाई, तिमी ढिलो हुन्छौ कि यहाँ पुग्न भनेर मलाई चिन्ता लागेको थियो तर घोडाले समयमै पु-याइदियो ।
अर्को अचम्मचाहिँ मलाई के लाग्यो भने तिम्रो यो एक बोरा असर्फी आफ्नै गरिब जनतालाई बाँडेर आउँछौ भन्ने सोचेको थिएँ तर तिमीले त साथमै बोकेर ल्याएछौ । अब यही चौतारीमा राखिदेऊ यसलाई पनि । भोलि यही गाउँका नागरिक आएर बाँडेर लिन्छन् । स्वर्गमा यी सब चिज वर्जित छन् । प्रधानमन्त्री तिमीले आफ्नो अन्तिम १२ घण्टाको समय, आफ्ना परिवार, भाइ भारदार, स्वयंभित्रको अनुभूति गर्न छाडेर तिमी मेरो सम्पत्ति, मलाई नै चाहिन्छ भनेर बोकेर हिँडेछौ । तिमीले परीक्षाका रूपमा पाएको १२ घण्टालाई पनि सही सदुपयोग गर्न सकेनौ ?
प्रधानमन्त्री राज्यबाट भागे पनि मृत्युबाट भाग्न सकेनन् । जति दौडे पनि, जता भागे पनि मृत्य आफ्नो समयमा आइ नै पुग्छ । त्यतिबेला कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले बुद्धिविनोदमा लेखेका पंक्ति याद गर्नुको विकल्प रहँदैन शायद :
‘कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ
कसोगरी यो पिँजडा लिँदो भएँ
कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन
तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन’
भन्ने भावको बोध हुने थियो कि ?
प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको आयु कति होला ? जन्मदेखि आर्यघाटसम्मको दूरीमा जीवन छ । यो अकाट्य छ, जसले जति धन दिएर, घूस खुवाएर आफ्नो पक्षमा, आफूले चाहेको समयमा आर्यघाट पुग्छु भनेर कुनै तिकडम लगाउनुको अर्थ छैन । कहिले भौतिक द्वन्द्ववाद त कहिले सर्वहारा वर्गका नाममा, कहिले साम्यवाद त कहिले अधिनायकवादका परिभाषा र प्रपञ्च रचे पनि अस्तित्वले सारा प्राणी र चराचर जगतसँग सहअस्तित्व कायम गरेर आफ्नो कार्य गरेको छ । समानता र सन्तुलनको अर्थ प्रकृतिलाई थाहा छ । कतिबेला कहाँ के हुनुपर्ने उसलाई थाहा छ । सूर्योदय र सूर्यास्तको समय हामीले घडी हेरेर केही हुनेवाला छैन, अस्तित्वको घडीअनुसार चलेको हुन्छ । कहिले बादल, कहिले घाम, कहिले पानी, यी सब प्रकृतिको आफ्नो नियम र समयमा चलेको हुन्छ । यिनको कुनै उद्देश्य पनि छैन । अस्तित्वले आफ्ना सिर्जनासँग कहिले र कहाँ द्वन्द्व गरेको छ र ? योग अर्थात् मिलनमा अस्तित्वको संरचना जीवित छ । मानिस त्यही अस्तित्वको एउटा अंश हो । मानिस हुनुको गुणवत्ता प्राकृतिक स्वभावमा बाँच्नु हो । तर स्वार्थ, लुट, भ्रष्टाचार, अराजकता, झुट, अन्याय, अनियमितता कहाँबाट भित्रियो ? के अन्यायचाहिँ अनन्तसम्म जीवित रहला ?
अझ सुन्दर पार्नु कसो गरी हो ?
गरी काव्य सुधा–रस–पान अरे
गर मानव जीवन सार्थक रे !
धरणीधर कोइरालाले व्यक्त गरेझैँ यो जीवनलाई सुन्दर बनाउन चाहिने गुण के हुन् ? मानव जीवन सार्थक बनाउन के हुनुपर्ने हो ? रूप, धन, पद, प्रशंसा, सन्तान, परिवार, अध्ययन ? के÷के हुन सक्लान् ? अहँ, यी विशेषण त्यतिबेला सुन्दर लाग्छन् जब व्यक्तिको मन, वचन र कर्म सुन्दर हुन्छन् । जब व्यक्तिसँग जोडिएका विशेषणले व्यावहारिक विशेषता जनाउन र प्रस्तुत गर्न थाल्छन् तब उसको स्वभाव र कर्म सबैलाई प्रिय लाग्छन् । अन्यथा उसको पदलाई कसैले मूल्य दिँदैन । जबसम्म प्रत्येक मनुष्यको जन्म र मृत्युको विशेषता उस्तै रहन्छ तबसम्म अस्तित्वले कोही उच र निच, सम्पन्न र गरिवबीचको भेदभाव छुट्टयाउन आवश्यक ठान्दैन । जन्मँदा साथमा के लिएर आयो र मृत्युको क्षणमा साथमा के लिएर जान्छ ? जन्मँदा मनुष्य भएर बाँच्ने संकल्प लिएर आउँछ र मृत्यु हुँदा उसको शील, स्वभाव, प्रेम र परोपकारी भावको गुणगान लिएर जान्छ । अन्यथा आफ्ना घमण्ड, भ्रष्ट आचरण, अराजकता, चतु¥याइँ सबै छाडेरै जानुपर्ने हुन्छ ।
कोही किन बाठो र चतु¥याइँ बन्न खोज्छ ? कोही किन अरूलाई ठगेर, लुटेर, जीवनको अंकगणित मिलाएर सबैलाई मूर्ख बनाउने कोसिस गर्छ ? यी सब व्यर्थका प्रयास हुन् । अस्तित्वमा हुने अनुकूलता र प्रतिकूलता सबै परिस्थिति त आफ्नो जीवनमा प्रभाव पार्न सक्ने हुँदैनन् भने मानव निर्मित कृतिम विचारधारा र सोच कसरी स्थायी र व्यावहारिक हुन्छन् ? यो जीवन नै स्थायी छैन भने व्यक्तिले आर्जन गरेका भौतिक चिज स्थायी हुन्छन् र यति धेरै चलाखी र धुत्र्याइँको जरूरत ? स्वार्थबाट परमार्थ, अभावबाट स्वभाव, सम्मानबाट आत्मसम्मान र भ्रष्ट आचरणबाट सदाचारमा रूपान्तरण हुन सके जीवनमा पश्चाताप पर्ला त ?
अरूलाई जान्ने र बुझ्ने कोसिस गर्नेले आफ्नो जीवनको गीता आफैं पढ्न सके कति आनन्ददायक परिवर्तन आउँदो होला जीवनमा । अरूको जीवनमा अन्धकार र अहंकार देख्नेले आफ्नो जागरण र मनका वृत्तिहरूबाट जागृत हुने कला जान्न सके कति सार्थक हुँदो हो जीवन । सत्कर्म, सद्भाव, सत्य र सदाचार मानिसका गोचर हुन् भन्ने स्मरण गराउन अरू कति समय कुर्नुपर्ने हो ? गहनरूपमा चेतना जागृत र सर्वोच्च आनन्दको अनुभूतिबाट वञ्चित हुनुपर्ने जत्तिको गरिबी अरू केही हुन सक्ला ? संसारबाट भित्र मोडिने कलाबाट वञ्चित हुनु भनेको आन्तरिक विकास र आत्मसम्मानबाट आफैँलाई पर धकेल्नु हो । हाम्रै संस्कारले हाम्रो पुर्वाद्र्ध बनेको छ र त्यसकै आधारमा भाग्य निर्माण भएको छ । आफैँले कोरेको भाग्यलाई, जीवनको उत्तरार्धलाई बिर्सेर अराजक बन्नुको साटो आफ्नो दिव्य सोच र समझको विकास गर्न सके जीवन आहा बन्दै अन्तिम क्षणको सुखद प्रतीक्षामा रहने थियो ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७७ १०:१५ बिहीबार
धन रूप प्रशंसा पद आर्यघाट जन्म